Ibrahim Allah(swt) Ha u Naxariisto Ehelkiisii,Axsaabtiisii iyo Dhamaanteena Samir iyo Iimaan – hogaanka.org
Ibraahim Cabdishakuur oo ku jira da’da 20-aad wuxuu dhiganayay fasalka labaad ee kuliyadda injineeriyadda, ee Jaamacadda Camuud, isagoo baranayay cilmiga kheyraadka Biyaha.
Ardaygan oo ka mid ahaa ardeyda jaamicada camuud ee Jamhuuriyada Somaliland ayaa dadka sida khaladan wararka u faafiyaa isku dayeen iney dadka majarahaabiyaan oo marxuunka xaqiiqada ka duwaan arintu sidii ay u dhacdey balse hada cid waliba way ogaatey xaqiiqada dhimashada wiilkani iney ahayd mid shil ah oo ka timid askari ilaalinayey jaamacad gacanta lagu hayo oo baadhitaan lagu hayo.
Allah naxariistiisa ha siiyo marxuumka ehelkii,axsaabtiisii iyo jamicada Camuudna samir iyo Iimaan ha ka siiyo isha Allah wuxuu helidoonaa cadaalad.
Aas sharaf leh ayaa loo sameeyey oo sida aan xog ku hayo ehelkiisina ka soo qaybgaleen dhamaan dadkii abaabuley aaskan iyo dawlada Somalilandba waa ku amaanaynaa.
Dadkii doonayey iney Somaliland sawir xun iyo waxaan jirin ku eedeyaana guuldaro ayey u tahay been abuurkoodu balse waxaa la gudboon iney cid hadeyn wax u sheegayaan
U hiiliyaan kumanaanta la da’da ah Ibrahim ee la sheegayo in dawlada federalka ahi geesay dagaaladii Tigreyga ee itoobiyaha oo waalidkood aaney war iyo wacaal ka helin jaan iyo cidhib meel ay dhigeen raq iyo ruuxna lahayn cid wax iska weydiinaysaana aaney jirin bal ila fiirso eheladii wiilashaasi oo murugada ka muuqata iyo jawaabta dawlada federalka ah oo aan waxba u arkeynin arinta dhalinyaradan maqaalkan bbcsomali ka diyaarisay 10 June 2021:
Soomaaliya iyo dagaalka Tigray: ‘Farmaajo iyo Fahad waxaan leeyahay ma dooneeyno inaad ibsataan caruurteena’
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay mudaharaad ay qaar ka mid ah waalidiintii dhalay askartii la sheegay in tababarka militariga loogu diray dalka Eritrea ay ka dagaallameen Itoobiya, ay ku dalbanayeen in dalka dib loogu soo celiyo askartaas.
Waalidiinta ayaa dalbaday inay ogaadaan halka ay carruurtooda ku sugan yihiin maadaamaa ay soo baxeen warar sheegaya in dagaalkii gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, laga qeyb geliyey dhallinyaradii ciidan oo Soomaali ah.
Waalidiintan ayaa la arakayay iyagoo wajiyadooda ay caro ka muuqato, sidoo kalana kor u lulaya boorar ay ku xardhan yihiin hal ku dhigyo ay dowladda kaga dalbanayaan halka ay ku sugan yihiin carruurtooda.
Jaamac Cabdullaahi Buulle, oo ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay inuu ka maqan yahay wiilkiisa oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac oo ku dhashay dalka Sacuudi Carabiya.
“Maxamed oo aan si uu Alle ogyahay ku soo koriyay, waxaa iga qaaday dowladda, gaar ahaan Mama Khadiija meesheeda. Waxaa qoray Fahad Yaasiin,” ayuu yiri.
Dhanka ciidamada sirdoonka iyo taliskooda kama aysan hadlin eedeynta loo soo jeediyay iyo bannaanbaxyada waalidiintan. Balse dowladd Soomaaliya ayaa markasta iska fogeyso in dhallinyaro Soomaali ah ay ka dagaallameen gobolka Tigray.
Jaamac oo sii hadlaya wuxuu yiri: “Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaan leeyahay carruurteenna noo soo celiya, dalka haddaysan qaran u noqonaynin, ma doonayo in aad iibsato adeer”.
Dhanka kale, Faadumo Maxamed Kheyre oo ka mid ah waalidiinta isu soo baxay ee dalbanaya in carruurtooda loo soo celiyo, ayaa sheegtay inuu ka maqan yahay wiilkeeda Yuusuf Garaad Cabdi oo 18 sano jir ah.
“Yaanyo ayaan ku soo koriyay Yuusuf Garaad, dowladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan umadda Islaamka waxaan ka codsanayaa in wiilkayga la ii keeno,” ayey tiri.
“Toddobaadkii ciidda ka horreeyay ayuu isoo wacay, wuxuu igu yiri ‘labada keliyood baa i xanuunaya’, isbitaal baan jiifaa’, mana ii sheegin waxa keliyaha uga dhacay, sidaa darteed waxaan codsanayaa in wiilkayga la ii soo celiyo.”
Faadumo ayaa sidoo kale sheegtay in darraad loo soo sheegay in wiil ay eeddo u tahay uu lug iyo gacan ka curyaamay.
Dowladda Maxay ka tiri?
Ka dib mudaaharaadka waalidiinta, waxaa shir jaraa’id Muqdisho ku qabtay Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe, wuxuuna xaqiijiyay in ay jiraan ciidamo Soomaali ah oo tababar ugu maqan Eritrea.
Balse wuxuu sheegay in “la siyaasadeynayo” arrinta. Wuxuu beeniyay wararka sheegaya in ay jiraan Ciidamo Soomaali ah oo ka dagaalamay Gobolka Tigray.
“Waa wax kama jiraan, Ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Tigray ka dagaalamay,” ayuu yiri.
“Dhalinyaradeena waxey wali Eritrea noogu maqan yihiin Tababar mana jiro qof ka dhintey iyagoo caafimaad qaba ayay dib ugu soo laaban doonaan dalkooda marka ay tababarka dhamaystaan.”
Hadaba dadka Somaliyeed waxaa looga bahan yahay in aan caadifad,isku dir iyo been abuurku ina hagin ee fikirkoono iyo aragtideenu noqotaa mid ka tarjumeysa xaqiiqo,fojignaan iyo isku soo dhaweyn shacabka Somaliyeed balse Somaliland oo nabadgelisay dhamaan Somalida iyo Caalamka si nabadana loogu wada nool yahay sharci dawlad iyo isla xisaabtana ka jiro lagu been abuurane meelahaa u baahan cadaalada,dawladnimada ee dawlada federalka ahi ka mid tahay saxaafadu runta ka sheegto dadkana aan laysku dirin.
Why the colour of your fruit and vegetables matters — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Previous
East Africa’s Ray of Hope in a Challenging Year for Democracy Next